ရေအေးအေးလေးနဲ့ မျက်နှာသစ်တဲ့အခါ - Hello Sayarwon
မျက်နှာကို သန့်စင်တာ၊ မျက်နှာသစ်တာက နေ့စဉ်လုပ်နေကျ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေး အလေ့အထ တစ်ရပ်ပါ။ ဒီလို မျက်နှာသစ်တဲ့အခါ အသုံးပြုနေတဲ့ ရေရဲ့ အပူချိန်ပေါ်လိုက်ပြီး အရေပြားပေါ်မှာ သက်ရောက်မှုလေးတွေ ကွာခြားနိုင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုရေနဲ့ သစ်သစ် မျက်နှာက သစ်ပြီးသွားတာ မှန်ပေမယ့် မျက်နှာသစ်တဲ့ ရေအပူချိန် မှန်မှန်နဲ့ သစ်တာကတော့ မျက်နှာအရေပြားကို အကျိုးကျေးဇူး များစေနိုင်ပါသတဲ့။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ မနက်နိုးတဲ့အခါ ရေအေးအေးလေးနဲ့ မျက်နှာသစ်တဲ့အခါ ဘယ်လို ကောင်းကျိုးလေးတွေရနိုင်လဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
ရေအေးအေးနဲ့ မျက်နှာသစ်လို့ ရလား ……
လူအတော်များများ လက်ခံထားတာက မျက်နှာပေါ်က အညစ်အကြေးတွေ စင်ကြယ်စေဖို့ဆိုရင် ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ သစ်ရမယ်လို့ပေါ့။ ရေနွေးနဲ့ သစ်တာက အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေရှိသလို မိုးလင်းလာတဲ့အခါ ရေအေးအေးလေးနဲ့ မျက်နှာသစ်တာကလည်း အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေ ရှိပါတယ်။
ရေနွေးနွေး နဲ့ မျက်နှာသစ်လို့ ရသလို ရေအေးအေးနဲ့လည်း မျက်နှာ သစ်လို့ ရပါတယ်။
ရေအေးအေးလေးနဲ့ မျက်နှာသစ်တဲ့အခါ အခုလို အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
မျက်နှာကို ရေအေးအေးလေးနဲ့ သစ်တာက ချွေးပေါက်တွေကို ကျဉ်းစေဖို့ ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။ ချွေးပေါက်ကျယ်နေသူတွေ လုပ်ကြည့်သင့်တဲ့ နည်းလမ်းလေး တစ်ရပ်ပါ။
ချွေးပေါက်တွေကို သေချာလေး သန့်စင်နေစေဖို့တော့ လိုပါမယ်။
မျက်နှာကို ရေအေးအေးနဲ့ သစ်တာက မျက်အိတ်ဖောင်းတာ၊ မျက်လုံးမို့အစ်တာ အပါအဝင် မျက်နှာပေါ်မှာ ရှိတဲ့ ရောင်ရမ်းမှုတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ရေအေးအေးလေးက မျက်နှာပေါ်က ရောင်ရမ်းမှုတွေကြောင့် အလှမပျက်စေဖို့ ထောက်ကူပေးနိုင်မှာပါ။
မျက်နှာကို ရေအေးအေးလေးနဲ့ သစ်တာက မျက်နှာ အသားအရေကို အစိုဓာတ် ထိန်းပေးပြီး ရေဓာတ် ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အသားအရေကို စိုပြည်တင်းရင်းစေဖို့ ထောက်ကူပေးနိုင်မှာပါ။
မျက်နှာကို ရေအေးအေးလေးနဲ့ သစ်တာက မျက်နှာပေါ်က အဆီတွေကို အထိရောက်ဆုံး ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ အဆီပြန်လွန်းတာကြောင့် ဝက်ခြံမဖြစ်စေဖို့လည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဝက်ခြံတွေ သက်သာစေဖို့လည်း အသုံးပြုပေးလို့ ရပါတယ်။
ဝက်ခြံကြောင့် နီမြန်းတာတွေကို သက်သာစေနိုင်တယ်
မျက်နှာကို ရေအေးအေးလေးနဲ့ သစ်ပေးတာက ဝက်ခြံကြောင့် နီမြန်းရောင်ရမ်းတာတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။ ဝက်ခြံတွေကို အရောင်ကျစေနိုင်သလို နာကျင်မှုတွေကိုလည်း သက်သာစေနိုင်မှာပါ။
မျက်နှာကို အပူချိန်မြင့်တဲ့ ရေနွေးနဲ့ သစ်တာ ချွေးပေါက်ထဲက အညစ်အကြေးတွေကို သန့်စင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် အရေးအကြောင်းတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မျက်နှာမှာ အရေးအကြောင်းကင်းစေဖို့ဆိုရင် အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းက ရေအေးအေးလေးနဲ့ မျက်နှာ သစ်တာပါ။
ရေအေးအေးလေးနဲ့ မျက်နှာ သစ်တာက အရေပြားမှာ အရေးအကြောင်းတွေ မဖြစ်စေဖို့ အကောင်းဆုံး ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။
ကဲ ….. ရေအေးအေးလေးနဲ့ မျက်နှာသစ်တော့မယ်လို့ စဉ်းစားနေပြီဟုတ်။
What Are The Benefits Of Washing Your Face With Cold Water? https://www.stylecraze.com/articles/washing-face-with-cold-water/ Accessed Date9November 2021
Is Washing Your Face with Cold Water the Secret to Glowing Skin? https://www.ipsy.com/blog/cold-water-for-skin Accessed Date9November 2021
မျက်နှာအကာအကွယ် (Face Shield) တစ်မျိုးတည်း တပ်ခြင်းက စိတ်ချရပါ့မလား